အင်တာနက်ခေတ် (ETIA) ကွန်ဖရင့်တွင် SMPTE ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာတွင် Netflix ၏ Neil Hunt ကအဓိကပြောမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Netflix ၏ Neil Hunt ကအင်တာနက်ကိုအသက် (ETIA) ညီလာခံအတွင်း SMPTE Entertainment ကနည်းပညာမှာ Keynote Give မှ
Netflix ၏ Neil Hunt ကအင်တာနက်ကိုအသက် (ETIA) ညီလာခံအတွင်း SMPTE Entertainment ကနည်းပညာမှာ Keynote Give မှ
ညီလာခံမီးမောင်းထိုးပြထားသည်လုံခြုံရေးအပေါ် Panel ကို Netflix နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုန်ပစ္စည်းအရာရှိချုပ် Featuring ဆွေးနွေးချက်, ကြိမ်မြောက် AR / VR အပေါ်တိုးတက်လာနှင့်အထူးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ Include
White Plains, နယူးယော့ - မေလ 27, 2015 - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က (R) (SMPTE(R)), ယနေ့ဒေါက်တာ Neil Hunt က, Netflix မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထုတ်ကုန်အရာရှိအတွက် Entertainment ကနည်းပညာမှာပြောရမှာလိပ်စာတင်ပြလိမ့်မည်ဟုဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်ကြေငြာခဲ့သည် အင်တာနက်ကိုအသက် (ETIA) ညီလာခံ, Palo Alto, California ပြည်နယ်အနီးစတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်တွင်ဇွန်လ 16-17 ဘို့စီစဉ်ထားဒီနှစ်။ "ဒီလူမျိုးတွင် Is!" အမည်ရအဆိုပါကွန်ဖရကအင်တာနက်အပေါ်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံကိုပို့ဘို့အတိတ်, လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်။
Pat "ဟုသော်လည်းနီးလ် Hunt ကတစ်ချိန်ကမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအနှံ့ကအခြားခေါင်းဆောင်များကောင်းစွာအင်တာနက်ကိုအပ်ဖျော်ဖြေရေးအကြောင်းအရာလောကီသားတို့သည်အရှိသူ၏ကြီးမားတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသတိပြုမိကြသည်, 'ဘယ်သူမှအစဉ်အဆက်ကြား၏ရဲ့အရေးအပါဆုံး Netflix နဲ့အလုပ်အမှုဆောင်' 'ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်" Griffis မှာပညာရေးဒုသမ္မတအဖြစ် SMPTE နှင့် ETIA 2015 ညီလာခံအစီအစဉ်တွင်ကုလားထိုင်။ "ရင်းနှီးသောပါဝင်ပတ်သက်သည့် Netflix ဟာပိုက်လိုင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်၌, နီးလ်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သည်အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုများ၏မဟာဗျူဟာနှင့်အောင်မြင်မှုသို့ထူးခြားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ပူဇော်ဖို့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအပြောရမှာလိပ်စာနှင့်တစ်ဦး session တစ်ခု panel ကိုအပေါ်သူ၏ပါဝင်မှုတစ်ခုပြီးသား-စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ETIA ညီလာခံအစီအစဉ်ကိုကြွယ်ဝစေပါလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါ ETIA 2015 ညီလာခံအတွင်းမှာတော့တစ်ဒါဇင်ကျော်အစည်းအဝေးများအင်တာနက်ကိုဖျော်ဖြေရေးပြောင်းလဲနေတဲ့ဘယ်လိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့နဲ့တက်ရောက်ကူညီလိမ့်မည်ဟုအခြေအနေတွင်များကိုအတူတကွ, နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဂေဟစနစ်ကျွမ်းကျင်သူများကဆောင်ခဲ့ဦးမည် - အင်ဂျင်နီယာများ, ဖန်တီးမှုများနှင့်သုတေသီများဖျော်ဖြေရေးများ၏အနာဂတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက် အင်တာနက်ကိုကျော် - နှစ်ဦးစလုံးနည်းပညာနှင့်လျှောက်လွှာခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုနားလည်ပါ။ ပထမဦးဆုံးနေ့၏နေ့လယ်ချွတ်ကန်, Hunt ကန့်ပြောရမှာလိပ်စာဘယ်လိုအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာကြည့်ရှုမည်နှင့်အင်တာနက်များဖို့အတွက် Titans တွေကပိုကောင်းတဲ့စားသုံးသူမှဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာများကိုပူးပေါင်းနိုင်ပါ။ Hunt ကဒီအဆိုပြု၏စိန်ခေါ်မှုများအဖြစ်ကအားလုံးကိုပါတီများ, အထူးသဖြင့်စားသုံးသူမှဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်အကျိုးကျေးဇူးများဆှေးနှေးပါမညျ။
Hunt ကအဆိုပါ streaming များပလက်ဖောင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှအကြောင်းအရာများအကြံပြုဖို့အသုံးပြု algorithms အထောက်အပံ့အသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်သောငွေပမာဏအပါအဝင် Netflix နဲ့နည်းပညာကိုကြီးကြပ်။ စိတ်ကြိုက်အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေး function ကိုအသုံးပြုပြီးက်ဘ်ဆိုက်, မိုဘိုင်းနှင့် subscribe မှအဖွဲ့ဝင်များကို enable ပြုလုပ်မတ်-TV ကိုအတွေ့အကြုံများ, select လုပ်ပါပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်များ - သူဒီဇိုင်း, အကောင်အထည်ဖော်မှုကို၎င်း, Netflix နဲ့ဝန်ဆောင်မှုနောက်ကွယ်ကနည်းပညာ၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင် နှင့်ကြည့်ရှုဘို့ပစ္စည်းတွေထက်ပို 1,000 အမျိုးမျိုးမဆိုသူတို့ကို stream ။ 100 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက် encoding က, သိမ်းဆည်းခြင်း, ကျော် 62 သန်း Netflix နဲ့အဖွဲ့ဝင်များမှတစ်နေ့လျှင် Streams အကြောင်းအရာသန်း 50 ကျော်နာရီပို့ဆောင်မှု: အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကိုလည်းပေးပို့ပိုက်လိုင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
Hunt ကလည်းအမည်ရအဆိုပါ panel က session တစ်ခုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါလိမ့်မယ် "ဟုအဆိုပါငွေ, ဆန်နီငါ့ကိုပြရန်!" သူဆွေးနွေးရန် Todd Collart, တည်ထောင်သူ, အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့် Deluxe OnDemand ၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ Phil McKinney, CableLabs ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူ join ပါလိမ့်မယ် နည်းနည်းဘတ်ဂျက်အဖြစ်ဖြန့်ကျက်အခြေအနေတွေပေါ်ဤအကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆန့်ကျင်ပို, ပိုမြန်ခြင်း, ပိုကောင်းတဲ့ pixels ကိုဟန်ချက်ညီသည့်အခါ over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) ဝန်ဆောင်မှုပေးဖြေရှင်းရမယ်သောကုန်ချင်းလဲလှယ်။ အယ်လန် McLennan, အဆိုပါ PADEM Group မှာသမ္မတနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သုံးသပ်အဲဒီ session အလယ်အလတ်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်ကွန်ဖရပျေါလှငျ virtual reality (VR) နှင့်တိုးပွားအဖြစ်မှန် (AR) နဲ့ပတျသကျတဲ့ဘတ်ဇ်အပေါ်တည်ဆောက်တဲ့ session တစ်ခုမှာယခုနှစ်အစောပိုင်းကထုတ်ပေးပါဝင်သည် NAB ပြရန်'' s ဖြင့်ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရုပ်ရှင်ရုံအပေါ်နည်းပညာထိပ်သီးအစည်းအဝေး (TSC), SMPTE။ "ဖျော်ဖြေမှုများအတွက် AR / VR တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ" အာသာဗန် Hoff, Jaunt အကြီးအကဲနည်းပညာအရာရှိချုပ်မည်ဖြစ်သည်; သူကကွန်ပျူတာရစ်ဖစ်များနှင့် User Interfaces ကို Lab မှညွှန်ကြားနှင့်ကိုလံဘီယာ Vision ၏နှင့်ဂရစ်ဖစ် Center က Co-ညွှန်ကြားရှိရာစတီဗင် Feiner, ကိုလံဘီယာအင်ဂျင်နီယာမှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခ, ခရစ် Ullrich, immersive, ထိတွေ့နိုင်သောတုံ့ပြန်ချက်နည်းပညာဦးဆောင်တီထွင်မှာအသုံးပြုသူအတှေ့အကွုံဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ; Tish Shute, immersive မှာကုန်ပစ္စည်းအတှေ့အကွုံညွှန်ကြားရေးမှူး; စတီဖာနို Baldassi, Meta မှာသိမှုဆိုင်ရာအာရုံ interaction ကနှင့်အသုံးပြုသူသုတေသန၏ဦးခေါင်း, နှင့် session တစ်ခုက Moderator Soren Harner, Meta မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထုတ်ကုန်အရာရှိ။ ဤရွေ့ကားကျွမ်းကျင်သူများကမကြာသေးမီ VR တိုးတက်လာခြင်းနှင့် AR နည်းပညာ, display ကိုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်သုံးသပ်, မိုဘိုင်းကိရိယာနှင့်အာရုံခံကိရိယာနည်းပညာများလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်သူတို့ဖျော်ဖြေရေးလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပုံပြင်များပြောပြနည်းလမ်းသစ်တွေကို enable ဘယ်လိုဆွေးနွေးခြင်းပါလိမ့်မယ်။
"ဒါကြောင့်ကို Safe မ: Web ပေါ်ရှိ Entertainment က" ဇွန်လ 16 ဘို့စီစဉ်ထားတဲ့အထူးညနပေိုငျး session တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Web ကိုဂေဟစနစ်၏သော့ချက်ဒေသများကိုယ်စားပြုကော်မတီ, စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး panel ကနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ options များစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်နှင့်မည်သို့အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေး - ရိုးရာစတူဒီယိုနှင့် OTT ကလက်ရှိသမ္မတအပါအဝင် - နဲ့ cloud-ဖြေရှင်းချက်ပေးသူသစ်ကိုအတွက်လုံခြုံရေးအကြောင်းအရာ၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကြသည် အင်တာနက်ကို-based အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး၏အသက်အရွယ်။ အဲဒီ session Kari Grubin, အဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေးစတူဒီယိုမှာကျွမ်းကျင်၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများကတည်းဖြတ်ကြလိမ့်မည်, ထိုသို့ Usman Shakeel, အမေဇုံက Web Services ကမှာကျောင်းအုပ်ကြီးဖြေရှင်းချက်ဗိသုကာပညာရှင်မည်ဖြစ်သည်; တွမ် Paquin, OnLive မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာအရာရှိချုပ်; ဖရန့် Artes, NSS ကိုအပြီး Labs မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာဗိသုကာ; Wendy ဖရန့်, BFI လုံခြုံရေးအတိုင်ပင်ခံမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်; Ted Harrington, ်မှာ Independent Security Evaluators မှာအလုပ်အမှုဆောင်မိတ်ဖက်; နဲ့ Chris Chen ကချုပ်အာရုံစိုက် / DAX မှာ CIO နှင့် CTO ။ ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးရှင်းလင်းပွဲ packages များနှင့်အတူထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်လည်းသီးခြားစီဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အပိုဆောင်း ETIA 2015 အစည်းအဝေးများလည်းအင်တာနက်ကိုပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့်အဆင့်မြင့် dynamic range ကိုများနှင့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ Spatial ယာယီ resolution ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်; ပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့် pixel ရောနှောနှိုင်းယှဉ်ချုံ့ထိရောက်မှု; အသစ်တစ်ခု Electro-optical လွှဲပြောင်း function ကိုအသုံးပြုခြင်း - လူ့အမြင်အပေါ်အခြေခံပြီး - သိမှုဆိုင်ရာအာရုံ quantizer ။ Panel များ, OTT န်ဆောင်မှုများအတွက်ရွယ်နှင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေးအကြားဆက်ဆံရေးစူးစမ်းအဖြစ်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေ, app ကိုဖန်တီး, ကိရိယာ compatibility နှင့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုမှဒါပေမယ့်လည်း tablet များရန်အင်တာနက်ကိုကျော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာပို့ဆောင်ဖို့မသာ related စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများစမတ်ဖုန်းပါလိမ့်မယ် နှင့်ကွန်ပျူတာများ။ နောက်ထပ်အစည်းအဝေးများပြဇာတ်ရုံနှင့်အိမ်များအတွက် object-oriented အသံဖြေရှင်းတော်မူမည် အင်တာနက်မှတဆင့်ဂိမ်းဖျော်ဖြေရေးအတွက်နှောင့်အယှက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု; နှင့်စားသုံးသူကအလွယ်တကူမိုဃ်းတိမ်ကနေလက်လှမ်းအခါအကြောင်းအရာဝယ်ကိုယ်ပိုင်ဖို့ရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကို။ ပိုက်ကွန်ကိုကြားနေရေးထံအပ်နှံတစ်ဦးက session ကိုလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာအပေါ်အမေရိကန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏သက်ရောက်မှုပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ ETIA 2015 ညီလာခံများအတွက်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်မှာရရှိနိုင်ပါ www.etia2015.org။ အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက SMPTE www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။smpte.org ။
အော်စကာ (R) နှင့် Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏သူဟာ Emmy (R) ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရလူ့အဖွဲ့အစည်း (R) (SMPTE(R)), ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသင်းအဖွဲ့, အနုပညာရဲ့တိုးအတွက်ခေါင်းဆောင်, သိပ္ပံ, နှင့်ပုံရိပ်, အသံ, နှင့် metadata ဂေဟစနစ်၏ယာဉ်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်း SMPTE တိုးတက်လာရွေ့လျား-ပုံရိပ်ပညာရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆက်သွယ်ရေးကိုဖြတ်ပြီး, နည်းပညာ, မီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ။ 1916 အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက SMPTE အဆိုပါထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် SMPTE motion Imaging ကဂျာနယ်နှင့် 800 စံချိန်စံညွှန်းများ, အကြံပြုအလေ့အထများနှင့်အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်ချက်များထက်ပိုမိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
6,000 အဖွဲ့ဝင်များကထက်ပိုမို - ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, အင်ဂျင်နီယာများ, ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, သုတေသီများ, သိပ္ပံပညာရှင်များ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ - ကမ္ဘာ့တစ်လျှောက်လုံးကဏ္ဍများအတွက်ဖြည့်ဆည်းသူ Society ကရေရှည်တည်တံ့။ ယင်းနှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မိတ်ဖက်မှတဆင့် ဟောလိဝုဒ် Professional ကမဟာမိတ်အဖွဲ့ (R) (HPA (R)), ဒီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ, ကြော်ငြာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှု, ထောက်ခံမှု, tools များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများပေးသူကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်းကပြည့်စုံသည်ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာနှင့်အခြားပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာအကြောင်းအရာ။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။smpte.org / join ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE-ETIA2015KeynoteNeilHunt.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Netflix နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုန်ပစ္စည်းအရာရှိချုပ်နီးလ် Hunt က
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE-PatGriffis-ETIA2014.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: SMPTE ETIA 2014 မှာပညာရေးဒုတိယသမ္မတ Pat Griffis နှင့်သူ၏နဲ
2015 NAB ပြရန် 2015 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2015 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ETIA 2015 NAB 2015 NAB ပြရန် Show ကို 2015 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား SMPTE Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က တီဗီနည်းပညာ 2015-05-29
ယခင်: နှစ်ဦးက New မိုဘိုင်း RF ယာဉ်များအတွက်က CP ဆက်သွယ်ရေးသွင်းယူမှုများ Barnfind BarnOne Fiber ပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းများ
နောက်တစ်ခု: Dejero တိုက်ရိုက် + NewsBook ဆော့ဝဲ BGAN ဂြိုဟ်တု Terminator ကိုသုံးပြီးဗီဒီယို uplink Enable မှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်